Maalinta: Abriil 19, 2019
Tababarka Bulshada ee Tababarka iyo Tifaftirka Dadweynaha ee Adana
Iskaashatooyinka bulshada ayaa ka soo kicitimay magaalada Istanbul iyada oo la eegayo mashruucan ay soo saartay Wasaaradda Ganacsiga, Agaasinka guud ee ganacsatada, farshaxanadayaasha iyo iskaashatooyinka si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan nooca iskaashatada bulshada iyo in la taageero, horumariyo lana ballaariyo iskaashiga bulshada. [More ...]
Agaasinka Gaadiidka Badda, oo ku xiran Kocaeli Metropolitan Waaxda Gaadiidka Dadweynaha, 20 Abriil (berri). Madaxweynaha Baaskiil Tour ee Turkey ka Kocaeli inta lagu jiro waqtiga kala guurka u dhexeeya k.mürsel-on-Izmit degmada Gölcük 55-13.30 of D-16.00 ah [More ...]
Polish Poland Railway Line Cusbooneysiiyay
Lines Polish Railway Lines waxay la saxeexday Intop - Torkol - Rajbud Consortium oo dib loogu soo nooleynayo khadka Podkarpackie - Chryzanów qaddarka € 32,3 milyan (138 million PLN). Wadadan tareenka ayaa ku taala qaybta bari ee wadanka Belarus [More ...]
In kasta oo degmada Osmaneli ee Bilecik ay sii kordhayaan oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayaan, haddana way u adkaysan kari weyday da'da gaadiidka. Wadada soo marta Osmaneli waxaa laga qaadayaa Osmaneli shirkadaha shirkada basasku ma booqdaan Osmaneli, [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ah inay meesha uga saarto gawaarida duugga ah ee lagu soo saaray tikniyoolajiyad hore, oo qatar gelineysa taraafikada, carqaladeysa qulqulka iyo keena wasakhowga deegaanka. Warqadda Canshuuraha ee Gawaarida [More ...]
Turkey Paramotor Slalom Competition, in la ogaaday in Bursa
Bursa degmada Metropolitan iyo Turkey by Federation of Air Sports 1 abaabulay. Turkey Paramotor Slalom Competition, Yunuseli u dhexeeya April 26 28-2019 lagu qaban doonaa garoonka diyaaradaha. Taariikhda Bursa taariikhi ah, dabiici ah iyo dhaqan ahaanba [More ...]
Adeegga Bedelka Bursaray
Adeegga wareejinta Bursaray ayaa la bixin doonaa: Iyada oo ku saabsan baaxadda daraasadaha dardargelinta calaamadaynta ee ay fulisay Dawladda Hoose ee Bursa si loo kordhiyo awoodda rakaabka ee Bursaray, 20 ayaa la qaban doonaa Sabtida, Abriil kadib 21.00. [More ...]
Maanta taariikhda: 19 April 1909 ilaa taariikhda
Ehelka kuwa naftooda ku waayey iyagoo ka jawaabaya kiiskii maxkamadda ee ka dhanka ahaa shaqaalaha 4 TCDD waxay go’aansadeen inay tallaabo ka qaadaan hortiisa Çorlu Courthouse. 9-sano jir Oğuz Arda hooyadiis oo ku dhimatay shilka [More ...]
Bixinta Khidmadda Hantida ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu sii wadaa kulamada cutubyada ku xiran Dowlada Hoose ilaa iyo habeenbarka. Markan Madaxweyne Büyükkılıç wuxuu qabtay shir balaadhan oo ku saabsan gaadiidka. Dawlada Hoose ee Magaalada [More ...]
Batman's Raybuss wuxuu rabaa inuu kordho taageerada
Baahida loo qabo in la beddelo qadka tareenka ee Batman-Diyarbakır ee gaadiidka tareenka waxaa taageeraya ololaha saxiixa wargeysyada Batmansonsöz. FAST, CHEAP iyo SAFE Batman waxay gacan ka geysan doonaan kahortaga wasakhowga hawada iyagoo yareyn doona tirada gawaarida ku yaal Wadada Diyarbakır, [More ...]
ABB waxay soo bandhigaysaa xalal cusub oo qorraxda ah ee booqdayaasheeda Solarex 2019
ABB, 05-07 Solarex 2018, oo ka dhacay Istanbul bishii Abril 11. Carwada Solarka Caalamiga ah ee Tamarta iyo Teknolojiyada, waxay ku soo bandhigtay xarumo waaweyn oo ay leeyihin iyo xalal caqli leh oo ku habboon agabyada warshadaha iyo guryaha. ABB, [More ...]